Ny fiantraikan'ny hetra amin'ny vidin'ny Apple isaky ny firenena | Vaovao IPhone
Ny vokatra Apple dia tsy mitovy vidiny na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao. Izay rehetra fatra-pitia fatratra ny vokatra teknolojia dia efa nandre ny mahazatra "Apple manao ny fanovana dolara: euro ho 1: 1". Ankehitriny, miaraka amin'ny fiovan'ny sandan'ny euro, dia resy mihitsy isika, lafo kokoa ny vokatra Apple any Eropa noho ny any Etazonia, na dia eo aza ny zava-misy fa mbola manana tombony noho ny vola amerikana ny euro Tena izany tokoa ve? Raha toa ka mety mino ianao fa diso izany, ary ny fahasamihafana amin'ny vidiny dia iray ihany no meloka: any Etazonia, tsy misy haba ny vidiny.
Andao hanaporofoana izany amin'ny ohatra azo ampiharina. Hividy 6GB iPhone 64 Plus amin'ny Apple Store an-tserasera isika, ary ho hitantsika fa manana vidiny € 899 izy io. Fa aleo vakiantsika ny pirinty tsara: «Anisan'izany ny VAT manodidina ny. € 157 ». Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny vidiny dia efa misy hetra Espaniola (21%).
Andao izao haka ilay maodely iray ihany fa ao amin'ny American Store, ary jereo ny vidiny: $ 849. Rahoviana izao tezitra isika rehetra ary miampanga an'i Apple ho nahazo tombony tamin'ny mpividy vahiny satria tsy mety hoe kely ny vidiny any Etazonia izay misy ny dolara ambany noho ny euro. Fa andao hiandry kely ary hiroso amin'ny dingan'ny fividianana.
Amin'ny dingana alohan'ny handoavana ny vokatra, dia tsy maintsy atao ny kajy ny hetra, izay hanampy ny vidiny farany. Eny, ao amin'ny Apple Store any Etazonia, ny vidiny mialoha ny hetra, nanomboka tamin'izay Ny fanjakana tsirairay ary na ny tanàna any amin'ny firenena amerikana avaratra aza dia samy manana ny hetrany avy mihatra amin'ny vokatra izany, ka tokony isaina arakaraka ny toerana onenanao izy ireo. Ao amin'ny ohatra nasehonay dia nametraka kaody zipin'i San Francisco aho ary manombana 76,41 $ hetra ao amiko, latsaky ny antsasaky ny karama any Espana. Ity izay azonay notsapaina tamin'ny iPhone dia miseho isaky ny vokatra Apple, ary afaka jerenao manokana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Ny fiantraikan'ny hetra amin'ny vidin'ny Apple isaky ny firenena
World Jurassic, tsara kokoa ny taloha rehetra
Ahoana ny fomba fanakanana isa ao amin'ny iOS 9